Ukuxhaswa kweeMali zoPhuhliso lweeDolophu - ii-Geofumadas
NgoJulayi, 2009 cadastre, UkuCwangciswa kweziThili
Leli gama lizwe eliza kubanjwa eTijuana, eMexico, ukusuka kwi-24 ukuya kwi-26 ka-Septemba ye-2009. Sicinga ukuba kubaluleke kakhulu kummandla waseLatin waseMelika, ngokukodwa kuba kusekelwe kumava avela kula mazwe.
Kwaye ukuba abo bethu abone iziphakamiso zokucwangciswa komhlaba ekuchazwe phezulu kwiprojekthi ye-regularization baya kukholelwa ukuba ingxaki ayiyiyo yobugcisa, kungekhona nolawulo, kodwa imali. Izicwangciso zizwakala lula: ukulungiswa kwendlela, ukufuduka kwabantu, ukwakha izakhiwo ezininzi, ukubuyisela ukufumana umthetho woluntu, phakathi kwabanye; Kodwa indlela yokuthatha iindleko zalo msebenzi kwaye ukufezekisa kwixesha elide ziyimingeni eyinkimbinkimbi kakhulu.
Phakathi kwezithethi ngabantu abanelungelo elifanelekileyo, abavela eUnited States, eArgentina, eMexico naseColombia, abaza kubelana ngokusemthethweni neziseko zobuchwepheshe kunye namava aphumelelayo avela kumazwe ahlukeneyo.
UAntonio Azuela De la Cueva
Inomdla ukuba enye yemiba isekelwe kwiimali zasezidolophini ngokusekelwe kwingcaciso ye-cadastral. Izihloko ezixoxwe ngazo ngoLwesine noLwesihlanu zi:
IsiGqeba esiPhezulu soMgaqo-nkqubo weeNdawo zaseLatin eMelika
IsiCwangciso soPhuhliso lweeDolophu kunye nokuThuthukiswa kweeMpahla eMexico
Ukungenelela kwamanzi eMexico
Uphuhliso lweZakhiwo zangempela eBaja California
Ulwazi lweCastastral for Improvement of Financing
Urban eLatin America
Urban e Tijuana
Umthetho we-Urban Financing eMelika
Umthetho weMihlaba eMexico
NgoMgqibelo kuya kubakho ukutyelela eValle de Las Palmas, apho abasebenzi be-URBI baya kunika inkondlo yabo. Emva koko kuya kuPunta Colonet, kuya kwaziwa ukuba iProjekthi ye-Multimodal yoRhulumente kaRhulumente isebenza njani.
Ngexesha elifanelekileyo kwi-Lincoln Institute, ngoku i-platform yokufaka isicelo ayizange ifumaneke okanye ayikhankanyi nolu khetho lwabafundi, kodwa bachaza ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo baya kwenza njalo. Kufuneka uqaphele, apha ungayifumana olunye ulwazi.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Microstation: imbono ayinayo umqulu
Post Next gvSIG: iGajes yale nto kunye namanye amashishiniOkulandelayo "